संवैधानिक संकटउन्मुख कांग्रेस, महाधिवेशन नभए के हुन्छ ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
नयाँ मिति तोक्न केन्द्रीय समिति बैठक
संवैधानिक संकटउन्मुख कांग्रेस, महाधिवेशन नभए के हुन्छ ?
मङ्गलवार, असोज ६ २०७७
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकोे १४औं महाधिवेशन तोकिएकै समयमा नहुने भएको छ। गत फागुनमै सक्नुपर्ने संगठन समायोजनको काम अझै नसकिँदा र बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तय भएको महाधिवेशन सो समयमा नहुने निश्चित भएको हो।
१३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गरेको कांग्रेसले फागुन ७–१० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको थियो ।
नयाँ मिति तोक्न बैठक
हाल तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुुने निश्चित भएपछि नयाँ मिति तय गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। असोज १९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। बैठकले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधनसहित नयाँ मिति तोक्ने छ।
विधानको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग गरेर पनि ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि अब कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको थप ६ महिना समय लिन सक्नेछ। त्यसअनुसार उसले अर्को भदौसम्ममा महाधिवेशन गर्नेगरी नयाँ कार्यतालिकासहित नयाँ मिति ल्याउन सक्नेछ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिए पनि पार्टीसामु नैतिक प्रश्न खडा हुने भन्दै वैशाख वा जेठभन्दा टाढा महाधिवेशन धकेल्न नहुने नेताहरुले तर्क गर्दै आएका छन्। विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको ४ वर्षको कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको हो । नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुनको अन्तिम साता सम्पन्न भएको थियो ।
विधानको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग गरेर पनि ५ वर्षभित्र महाधिवेशन हुन नसक्ने देखियो। अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको थप ६ महिना समय लिन सक्नेछ। तर संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिए पनि पार्टीसामू नैतिक प्रश्न भने खडा हुनेछ।
फागुनमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि अब नयाँ मितिबारे छलफल भइरहेको छ। कांग्रेससँग मयाद थप्न अन्तिम विकल्पको रुपमा छ महिना बाँकी छ। तर समायोजन र कोरोना महामारीका कारण भदौंमा पनि महाधिवेशन भइहाल्नेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार छैन। २०७८ भदौमा पनि महाधिवेशन नभए के हुन्छ भन्नेबारे पनि कांग्रेसमा छलफल हुन थालेको छ । २०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । भदौैंमा पनि महाधिवेशन नभए कांग्रेस संवैधानिक संकटमा फस्ने छ।
कांग्रेससँग केके विकल्प हुन सक्छन् त ? एउटा विकल्प सहमतिकका आधारमा अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने र सहज भएपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने। कांग्रेस नेताहरुका अनुसार पार्टीको वैधानिकता जोगाउन तत्कालका लागि अहिलेकै नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने र केही समयपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने विकल्प पनि हुनसक्छ । तर सहमति जुटाउन भने सजिलो छैन।
अर्को विकल्प भनेको विचार मिल्ने कुनै पार्टीसँग एकता गर्ने। कांग्रेससँग तत्काल एकता कसले गर्छ त? एउटा विकल्प छ, नेपाली कांग्रेस वीपी। कांग्रेसका पुराना नेता हरिबोल भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस बीपी बनाएका छन्। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन उनीसँग एकता गर्ने पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने नेताहरु बताउँछन्। तर एकताका लागि भट्टराई तयार हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने यकिन छैन। अथवा कांग्रेसले कसरी उनीसँग डिल गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ।
अन्तिम विकल्प संवैधानिक अड्चन फुकाउने पनि हुनसक्छ। तर त्यो कांग्रेसको हातमा छैन। संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ जुन कांग्रेससँग छैन। त्यो काम सत्तारुढ नेकपासँग मिलेर मात्रै सम्भव छ। नेकपाले पनि आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने तय गरेको छ। तर नेकपा महाधिवेशन पनि तोकिएकै मितिमा नहुने संकेत देखिएको छ। यही बहानामा कांग्रेसले नेकपालाई मनाएर संविधान संशोनमार्फत बाँधा अड्चन फुकाउन सक्छ।
के भन्छन् नेताहरु?
देउवाइतरका नेताहरु तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा छन्। महाधिवेशनको तालिका सार्दै जाँदा संवैधानिक संकट उत्पन्न गराएर देउवाले वर्तमान कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिने डर पनि इतर समूहलाई छ। डरका कारण पौडेलले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच महिनामा महाधिवेशनका लागि तयारी गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। ‘बाँकी रहेको पाँच महिना अवधिलाई सदुपयोग गरी समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरौं भन्ने हो,’ पौडेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘त्यो पनि नगरेर अधिवेशन टार्ने, नगर्ने नियत रहने हो भने पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन विशेष महाधिवेशन बोलाएर भए पनि पार्टी बचाउन सकिन्छ।’
त्यस्तै युवा नेता गगन थापा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नभए कांग्रेसले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन्। विधानमा नभएको कुरा नियमले परिर्वतन गर्न नपाइने भन्दै महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व पछि हट्न नमिल्ने थापाको तर्क छ।
पटकपटक महाधिवेशनको मिति सार्दा राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, फाल्गुन ६ २०७७ १२:१२:५२